रेड बुलको ट्रेडमार्क चोरी गरी ‘रेड ब्लु उत्पादन बिक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही हुने ! – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ breaking ∕ रेड बुलको ट्रेडमार्क चोरी गरी ‘रेड ब्लु उत्पादन बिक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही हुने !
रेड बुलको ट्रेडमार्क चोरी गरी ‘रेड ब्लु उत्पादन बिक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही हुने !
आर्थिक दैनिक २०७८, असोज २२ ०७:४२
काठमाडौँ । हाल प्रतिबन्धित कुनै बेलाको चर्चित पेय पदार्थ रेडबुलको ट्रेड मार्क चोरी गरी उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्नेहरुमाथि कारबाही हुने भएको छ । अष्ट्रियाको प्रतिष्ठित कम्पनिद्वारा उत्पादित रेड बुलको ट्रेडमार्क चोरी गरेर नेपाली बजारमा यतिबेला रेड ब्लु र रेड बफेलो विक्री वितरण गर्ने विरुद्ध कम्पनिले उजुरी गरेको छ । रेडबुलको ट्रेडमार्क चोरी गरेर रेड ब्लु उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही माग गर्दै वास्तविक उत्पादक कम्पनिले उद्योग विभागमा उजुरी गरेको हो ।
नेपालमा रेड बुल र डबल बुल ट्रेडमार्कहरु नेपालमा २०५५ सालदेखी नै दर्ता कायम छ । यो ट्रेडमार्क विश्वका २०५ भन्दा बढी मुलुकहरुमा दर्ता भई विश्वका १७३ भन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो उत्पादन विक्री वितरण भइरहेको छ । नेपालमा समेत अत्याधिक विक्री भइरहेको रेडबुलको एउटा लामो इतिहास छ । रेडबुलको उत्पादन सन् १९८७ देखि भएको कम्पनिको दाबी छ । नेपालकै एक कम्पनि मार्फत भियतनाम ल्याइएको रेड ब्लुलाई यसअघि समेत उद्योग विभागले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । तत्कालिन विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले रेड बुलको ट्रेडमार्क चोरी गरेको अभियोगमा रेड ब्लुलाई कारबाही गरेका थिए । भियतनामकै अर्को कम्पनि मार्फत नेपाल भित्र्याइएका रेड ब्लु नेपालभर विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।